Junedin Sadoo Alemudiin, Amhara fi Tigre Oromiyaati bobasee lafa Oromiya samsisee; Kutaa 6faa
Kana dura Junedin Sado yaaka Oromiyya keessati rawwataa ture kuta 1-hanga kuta 5 keessati gagababsee akka wara qoorannoo gegesuf toluti dhiyeesu yaalen jira, erga bareefami kun maxanfamee asi gaaf heedun wayee Junedin fi namoota birra irrati ka’aa jira. Biyya Ethiopia keessa Gazeexan, Redio ykn TV samtoota TPLF irrati waan tokko bareessuu waan hin jireef yaaki dalagama jiruu heedumacha dhufuu ilee hundi nama caalisee wal dhageefacha jira. Bu’aan bareefamii kun feede yamuun ilaalu ama garuu namoon heedun Ooganoon TPLF yaakaa isaa dalagan akka galmeeftan goodhee jira. Ooganaa TPLF kan ta’ee namii yaaka hin dalagiin hin jiru, OPDOn ilee hanga isheeti yaaka isheen daladuu arga jirtuu, Kessatu Junedin Sado Biirroo Barnoota Oromiyya domsuun yaaka ini dalagee yadachun qoofa nama ga’aa. Oogana Ijjarsaa Dandeeti fi Biiroo Baroota kan ture Salamoon Abebe Tesama Maliif dandeeetii isaa malee sadarka kana irra keesee jeedhame kan gaafatamee Junedin Sado deebin isaa “Salamoon Abebe Tesama Abban isaa Amhara haatii isaa Tigre ta’uu isheetin warii TPLF amanama dha jeedhan akka muudamuu goodhan, akkuma hundi keessan beektan waan Melesen jedhe mormuu hin danda’uu” jeedhe, Salamoon Abebe Barata Dr. Negaso Gidada kan ture fi Oromoon Dambi doolo tokko ilee OPDO ta’uu waan dideef Dr. Negasoon Salamoon Abebe kara irra qabee Miseensa OPDO goodhe. Warii TPLF amoo Salamoon haadhii isaa Tigre ta’uu yamuu baran namii kun ABO waliin ta’uu waan hin dandeenyef Oromoo domsuu irratii bobasan. Salamoon Ijaara dandeet fi Biirrro Baroota Oganuu dhisee hoolotaa 10 ilee tiksee olchuu kan hindandeenye Foon diimina nyatee, dadhii irrati dhugee dubartii argiiuu ala nama xalaya tokko bareesuu miti. Yoo waa bareessan iti keenani dubsee hin beeku malee.
Dr. Negaso Gidada seena isaa keessati Oromoof kun haata’uu jeedhe hin beekuu, ama ilee utuu dhabbileen Oromoo WFDO fi OBKn jiran Amhara barbadee seenun isaa Maluùma isaa argisisa kan kana na jeechisiseef “ kana dura ijoolee Oromoo biyya ala deeman muxannoo argachuu isaan hin barbachisu muxannoo Tigray irra argatan isaan ga’aa” jeechun isaa waan dhaga’eef kun amoo yaaka. Dambi Dolo OPDO kan turen, Negasoi fi Salamon Abebe qoofa sababin isaa Dambi Dolon biyya Gootoota Heedu Keessa dhalatan Ibsa Guutamaa, Leencoo Lata, Dhugasaa Bakakoo, Nagasaa Kumsaa, Abbaa Caalaa Lata, Kuyee Kumsaa hundi isaan ABO ta’aan keessati Damdoloti OPDO ta’uun saree matatuu ta’uun wal qixaa ture.
Gara bareefama koo haratiin isiin deebsa Junedin Sado Wajjira Bishan Oromoo samee qixeesuu isaa ilee yerro darbee isiin caqaseen ture, yamuu sana kassee Angoo fi Malaqi isaati mia’aa dhuftee, ergasii Booda Perezdaanti Oromiyya akka ta’een Jalala gudda Sheek Alemudii waliin ijaratee, Shaki Alemudiin Junedinin qabatee Oromiyya to’achuu egalee. Burayuu lafa lakkobsii isaa hin beekmanee dalaa itti ijaree kawwatee, Hoorrra Arsadii Hooteeal seena qabeessa cufee ka’ee, Shashamne hanga Wando Geneti Oromoo rasasan rebsisie lubu nama 3 badee Oromoo buqasee lafa fudhatee. Junedin Sado du’ii ijoole Arsi hooma tokko iti hin fakanee. Walga’’ii WFDOn bara 2005 Shashamenti gegesee irrati Ummani Arsi goocha Junedin Sado, Abadula Gemeda, Werqine Gabayow , Shifraw Jarsoo, Jaamal Abaso, Sisayi Negash, Alemu Simee, Dawano Kadiir, Adanchi Abebe, kkf Saxiludhan filaannoo bara 2005 nami tokko ilee isaa hin filatiin hafuu isaa Ummani Ethiopia gutuun ni beeka. Ummani Arsi ijooleen nu keessa dhalatee Habasha Harma fi Harka nu muree jala galtee gutuuma Oromiyya TPLF jala galchitee nu qaneefachiftee jeechun jiba Junedin faaf qabuu siirba fi gerarsan dhageesssa ture.
Junediin yaa ilma gadhee ( 2);
Arsin sii gatee galee (2);
Jeedhan faa irrati Magala Shashamneeti kassan hanga Gadab Asasaa fi Kokosati siirban. Ummata Arsi gosa Oromoo hunda Caalaa Siiran Habashan Miidhamuu isaa beekam ta’ee utuu jiru, lamii kan keessati warii dhalatan garuu Habasha jala ba’uu diida jiru. Ijoolen Junedin Sado faa Amerika keessati ABO irrati ijaaran ilee TPLF kufuu isaa tilmaman Ginbot 7 jala lixuun waan Junedin Sado faa hojeetan OPDO 2faa ta’uu labsachuun Ummataa Habashan gidirfma jiratee kan giddira jala tursuuf labsa jirachuun asi biyya keessati ilee wal sodachuu huma jira. ABO jijirama “Ethiopia Haadha keenya hundati” jeechun ummata Arsi annoolee irrati kuufee irrati qoosuu ta’uu isaa gaddan dubatuu jarsolin. Kana hunda ibsuun kan na barbachiseef Junedin Sado oftii amanta dhabuun namoota laga isaa fi amanta isaa hoordofan ijaaruun Samiicha seenuu isaa ibsuuf, ijaarsi Junedin kun amoo dafee diigamuu banan rakko wagga 100 Oromooti fiduu mala jeecha jira nami biyya keessa.
Oromiyya qofaa maliif samamee?
Kunilee Oftii amanuu dhabuu irran kan ka’eedha. Utuu naùmi kaka Junedin faa onnee qabatan laf Oromiyya yerro caalisee India, Chaina, Turk, Pakistan Saud Arabiyati, Djibuti, Negeria kkf yamuu gurguramuu hin caalisan turan, namoon kun rakko qabuu Malaqa ummataa waan hatanf kaka Abatee Kishoo faa nu hidhuu jeedhan dubachuu sodatuu. Namoon lagan wal ijaran gartuu Ango Oromiyaa dhuftan kun Waan Melese Zenawi, Azeb Mesifn, ykn Oogana TPLF tokko isaan ajeeju diduu hin danda’an. Tadase Haile V/Minstera Industrii fi daldala ta’ee Minstera Girma Birruu ajeja akka ture enyuu ilee ni beeka. Girma Birru amoo Junedin faa irra ni waayan kan jeedhamuu ture, garuu Oganoon OPDO akka dhiiraa Sure ufatan adeeman kun TPLF yamuu argan akka Galaa of irrati fincaanuu. Dhiir onnee qabduu murseen jirtu amoo Junendin faa Mata mata keessa gadi rukutuu ABO jeedhan tapela keenuuf.
b. Lafi Oromiyaa seeran ala gurguramee Hektara meeqa?
Junedin Sado fi gartuun isaa lafa Oromiyya seeran ala gurguramee Heektara 4,619,509 iitigafatamuu isaan mirkana’ee jira. Lafa amman irra hin jiree kana yamuu jeedhan ummani Bakko Tobe TV BBC ti bayee mana keenya diigan masaa keenya humnan nu irra fudhatan yamuu jeedhan adunyan ijan arga ture. Sheki Alemudiin Godiina Gujji gutuman gutuuti Junedin irra fudhatee waan barbadee goochun Bosona umma hunda baleeese, lafa goote washa goodhe qixeese qileensa naannoo yamuu baleeesu Mootumman naannoo Oromiyya Harka garuu Junedin wal jira jalati kufee jiru lammi Keenya Gujji kaka ummatatuu hin lakkofne jeedhama. Alemudiin Iluabbaboori galee laga Gummaroo yamuu fudhatuu, L.Wellega Booqa, Dalatii, Odda fi Godaree fudhachuu irra darbee lafa sun gara Benshangul Gumuziti kaka cituu goochun isaa beekma dha. Wendoo Genati, fi Necii Sara lafa Oromiyya yamuu humnan fudhatan Junedin Sado laf Oromiyya kan jiruu iyuu ni bayatee jeedhe qoosee, yerron kun irra deebiyee dubatuuf dirqamuu ni dhufaa.
c. Furmatti isaa malii?
Amaf furmata atatama keenuu banne ilee furmta ta’uu malii lafa keenye wal barsisuuf gaafa guyyan isaa dhufuu yamuu dafani hojii irra olchudha. Oromoo waan beekuu qabuu keessa Bara Minnlik – Haile Silaseeti, Oromoon lafa dhorkamee waan lafa irraa humishii 75% - 95% abootii lafaf keena ture, kana malee Cisanya jeedhamee torbanti yerroo lama ykn yerro sadii abba lafa fi hojeechuuf dirqama ture; TPLF amoo haara waan siirna darbee sun irra hama ta’ee namoota ala jalatii Oromoon Cisanya ta’sise akka buluu goodhamee. Bara Miniliki kasse hanga TPLFti ummani habasha garuu siirna cisnyama hin beeku ture, amasii tanan lafi Oromiyya fi Gambela fi Belnshangul 4,619,509 yamuu gurguramuu Tigre fi Amhara keessa Heektarii tokko ilee hin gurguramnee. Oromoo Kana beeka?, Melesen waan Minilik Hojeecha ture hojeecha jira. Junedin Sado fa amoo erga Melese kan Oromoo irrati rawwachisaa jiruu. Kana Habashan Tigre, Amhar ykn Guragen goochan isaan fi yaadin isaan tokko, insiin Oromiyya kara itiiin saman qoopheefachuu dha. Kun seena akka ta’ee darbuuf Oromoon bilisumma isaaf cimee hojeechuu qaba.
1. Diinoota isaa midha jira Habsoota irra bituu fi itti gurguru dhisuu qaba;
2. Diinoota qe’ee isaa dhufan lafa isaa irra fudhatan hunda irrati tarkanfii dandee fudhachuu qaba;
3. Diinootaa lafa isaa gurgura jira kana akka isaan itigafataman iti himuu qaba;
4. Abbootii qabeenya lafa kana fudhachaa jira seera qabeessa akka hin tanee fi isaan ilee fudhachuu isaanf adbiin du’aa kaka isaan egatuu amuma iti himudha;
5. Moottummon Adunya samicha lafa seeran ala kana amuma qaban seena ala ta’uu isaa beeksisun murteessadha;
6. Jijirama qileensa fi mancainsa Bishan fi suuma’uu bioo Oromiyyati Onganoon TPLF fi Abbootiin qabeenya murtee isaa akka argatan iti himuu fi umman ilee waan kana kaka beeku Media walaban barsisudha.
7. Oromoo Dhuggan lamafa Habasha amantan dukka yoo hirirtan Oromoon OPDO lamafa yommmi ilee kan hin feene ta’uu isaa isiin dhamna.
Yerro ama kan Oromiyya keessati rakko biyyati kan moormatan baratoon Oromoo 1000 lakawaman mana hidha keessati dararama jiran. Baratoon kun Maikalawi, Manoota Hidha Anaa fi Zoni keeti dararama jiru. Baratoon Oromoo Moormii kara naagaa dhiyeessanf Ajeecha, Reebicha, Torchi hama, dhidha ummurii gutuu fi murtee du’aatuu itii murteefama jira. Murteen Ama TPLF ijolee walala irrati geesisa jiru kun boor isaan irrati kaka murt’aa amuma inati himamuu qaba.